Suuriya: Russiya oo digniin culus u dirtay Maraykanka – Kasmo Newspaper
Suuriya: Russiya oo digniin culus u dirtay Maraykanka
Updated - April 11, 2018 11:31 am GMT
London (Kasmo), Dabeysha dagaal ee Russiya iyo Maraykanka oo Suuriya ayaa babbanaysa intii ka dambaysay weerarkii la sheegay Gaaska ee Duma iyo hanjabaadihii aargoosiga Donald Trump.
Trump wuxuu saacadihii la soo dhaafay dhaqaajiyay maraakiib military, halka Madaxweynaha Fransa, Macron, caddeeyay in dalkiisu kala tashan doono Maraykanka iyo Britain, jawaabtii la bixin lahaa.
Maalintii shalay, markii diyaaradaha dagaalka Russiya iyo Markabka dagaalka Maraykanka, Donald Cook, isku sigteen, Moskow waxay ka digtay tillaabo kasta oo Washington u qaaddo dhanka Suuriya.
Safiirka Ruushka u fadhiya Lubnan, Alexander Zasypkin, ayaa hoosta ka xarriiqay in xoogagga Russiya ka hortagi doonaan weerar kasta oo Maraykanku ku qaado dalka Suuriya. Ergaygu wuxuu caddeeyay in ciidammada Russiya soo ridi doonaan Gantaal kasta isla markaana burburin doonaan goobtii laga soo riday, haddii ay noqon lahayd dhulka ama markab iyo gujis.
Golaha Ammaanka Qarammada Midoobay ayaa tuuray qoraalkii 3aad ee Qaraar Russiya ka diyaarisay Suuriya kuna saabsanaa baarayaal Caalami ah oo loo diri lahaa Duma. Moskow waxay dhankeeda ‘VETO’ ku ridday qoraal Maraykanku lahaa kuna saabsanaa abuuritaanka Guddi baaritaan oo madaxbannaan.
Hay’adda Yurub ee nabadgalyada duulista hawada ‘EASA’ (European Aviation Safety Agency) waxay soo saartay digniin ku saabsan khadadka diyaaradaha ee bariga badda Dhexe (Mediterranean Sea). Qayladhaantu waxay ku saabsantahay suuragalnimada weerarro diyaaradeed iyo gantaallada dhul-cir iyo kuwa riddada dheer oo dhici kara 72ka saac ee soo socota.
Hay’addu waxaa kale oo ay ka digtay in qalabka war- isgaarsiinta diyaaraduhu (Radio navigation Equipments) ku iman karo khalkhal, loona baahanyahay in laga sii digtoonaado.